style – OOTDMYANMAR
Myanmar's Lifestyle Guide
Collaboration Fashion review
6 AESTHETIC & CASUAL OUTFITS TO TRY, AS SEEN ON NANG KAE MAR
Post author By OOTDMYANMAR
No Comments on6AESTHETIC & CASUAL OUTFITS TO TRY, AS SEEN ON NANG KAE MAR
နန်းခေးမား လို ဝတ်ဆင်ကြည့်နိုင်မယ့် Aesthetic နဲ့ Casual Outfit များ
Nang Kae Mar is definitely an OG Supermodel in Myanmar. Her gorgeous legs, daunting eyes and cool style makes her stand out. So, we had to check out her Instagram, for casual and aesthetic style inspirations, below are top-scoring OOTDs from Nang Kae Mar.
နန်းခေးမား က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ OG Supermodel တစ်ယောက်ပါ။ သူမရဲ့ လှပတဲ့ခြေထောက်တွေ၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ ထိမိတဲ့စတိုင်တွေက သူမကိုအများနဲ့မတူ တမူထူးခြားနေစေတာပါ။ ဒါကြောင့် casual နဲ့ aesthetic style inspiration အတွက် သူမရဲ့ Instagram account ကိုဝင်ကြည့်ရင်း နန်းခေးမား ရဲ့ ဝတ်စုံတွေထဲက အမိုက်ဆုံး outfit တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Black, White & Nude color combos
Photo via @nang_kae_mar
2. Flared Velvet pants + Hanging oversized coat
3. Denims + NUDE tank top
4. Go for Nude!
5. Brown Corduroy Coords
6.Blue Dress + Sunnies
Photo via @nang_kae_mar Blue Dress from @MDSMyanmar
Check out more designs at https://www.mdscollections.com.mm
Tags BURMESE, Fashion, mdsmyanmar, myanmar, nangkaemar, style
06 FRESH OUTFITS FROM MARY THAT WE CAN COPY
No Comments on 06 FRESH OUTFITS FROM MARY THAT WE CAN COPY
Mary လို လိုက်ဝတ်နိုင်မယ့် ပေါ့ပါးလန်းဆန်းတဲ့ Outfit ၆ မျိုး
Mary’s style is clean outfits in sexy cuts. Most of the time, she wears denims, which she pairs with tank tops. It seems like it’s always less is more for Mary!
Mary က ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး သန့်ရှင်းသပ်ရပ်တဲ့စတိုင်မျိုးဝတ်လေ့ရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် denim တွေကို tank top နဲ့တွဲဝတ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နည်းနည်းလေးနဲ့ပိုအထာကျတယ်ဆိုတဲ့စကားက Mary အတွက်ပါပဲ။
If you want to embody her Mary Soe vibe we’ve rounded below our favorite looks from her:
Mary လိုအထာကျကျဝတ်ဆင်နိုင်ဖို့ OOTD က သဘောကျနှစ်ခြိုက်တဲ့ Mary ရဲ့ outfit အချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
It’s undeniable that an all-black ensemble will always look good.
အနက်ဝမ်းဆက်က ဘယ်အချိန်မှာမဆိုကြည့်ကောင်းနေတာ ငြင်းလို့ရမယ်မထင်ပါဘူး။
A post shared by Mary (@_mary_soe)
2. VELVET SHORT SUIT
3. WHITE AND DENIMS
4. RED AND GLOW
Tags Fashion, marysoe, minima;, minimal, myanmar, ootd, ootdmyanmar, ootdmyanmart, ootds, style, yangon
GUCCI CELEBRATES LUNAR NEW YEAR WITH DORAEMON
No Comments on GUCCI CELEBRATES LUNAR NEW YEAR WITH DORAEMON
LUNAR နှစ်သစ်ကို DORAEMON နဲ့ ဆင်နွှဲလိုက်တဲ့ GUCCI
Photos via @gucci.com
The Italian fashion house’s partnership with manga sensation Doraemon in observance of Lunar New Year.
Italian fashion house က ဒီနှစ်ရဲ့ Lunar New Year ကို နာမည်ကြီး manga ဖြစ်တဲ့ Doraemon နဲ့ ပူးပေါင်းတင်ဆက်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။
Doraemon written by Fujiko Fujio, an earless robotic cat who travels back in time to aidaa boy named Nobita Nobi was introduced in the 70s. Since then Doraemon has been one of the most iconic Japanese characters and appointed as Japan’s first ‘anime ambassador’ in 2008 by Japan’s Foreign Ministry.
Fujiko Fujio က ရေးသားခဲ့တဲ့ Doraemon ဇာတ်လမ်း ဟာ Nobita Nobi ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို ကူညီဖို့အတွက် အချိန်ခရီးသွားခဲ့တဲ့ စက်ရုပ်ကြောင်လေးတစ်ကောင်အကြောင်းဖြစ်ပြီး ဒီဇာတ်လမ်းကို ၇၀ ခုနှစ်မှာ စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Doraemon ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ထူးခြားတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးရာဝန်ကြီးဌာနက Doraemon ကို ဂျပန်ရဲ့ ပထမဆုံး ‘anime ambassador’ အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
The Doraemon x Gucci Epilogue collection features over 50 items, including bags, shirts, jackets, coats, track pants, sneakers, shorts, sunglasses, card case and glasses, in Gucci’s classic monogram pattern with Doraemon prints and accents.
Doraemon x Gucci Epilogue collection မှာ အိတ်၊ တီရှပ်၊ ဂျက်ကက်၊ ကုတ်၊ track pants၊ sneakers ၊ ဘောင်းဘီတို၊ နေကာမျက်မှန်၊ ကဒ်ထည့်တဲ့အိတ်၊ မျက်မှန်၊ Doraemon ပုံတွေ၊ အငွေ့အသက်တွေ ပါဝင်တဲ့ Gucci ရဲ့ classic monogram စသည်ဖြင့် ပစ္စည်းအမျိုးပေါင်း ၅၀ ကျော် ပါဝင်ပါတယ်။
Priced between $189 and $5,351 the Doraemon x Gucci capsule is available now at Gucci’s web store
ဈေးနှုန်းတွေကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ 189 ကနေ 5,351 ကြားဖြစ်ပြီး Doraemon x Gucci capsule at Gucci ရဲ့ web store မှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Tags Fashion, gucci, guccixdoraemon, ootdmyanmar, style
08 HANNAYURI SUNSHINE OUTFITS TO INSPIRE YOU TO GO BACK TO TRY YEAR 2000 STYLE
No Comments on 08 HANNAYURI SUNSHINE OUTFITS TO INSPIRE YOU TO GO BACK TO TRY YEAR 2000 STYLE
၂၀၀၀ ခုနှစ်ကို တစ်ကျော့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားမယ့် HANNAYURI SUNSHINE Outfit ၈ မျိုး
MDSMYANMAR နှင့် ဖန်တီးတင်ဆက်သည်။
From knitted tees to pleated mini skirts, the Y2K trend is back! The current Y2K fashion trend isareappearance of clothing and aesthetic trends from the late ‘90s and the year 2000. And one of our favorite fashionista is sporting Y2K trends on her IG. So, if you’re intrigued and curious on how to slay this trend
ချည်ထိုးအင်္ကျီလေးတွေနဲ့ တင်းနစ်စကပ်လို မီနီစကပ်လေးတွေနဲ့အတူ Y2K trend က တစ်ကျော့ပြန်လည်ခေတ်စားလာပါပြီ။ အခုလက်ရှိလူကြိုက်များနေတဲ့ Y2K trend က ၉၀ ခုနှစ် နဲ့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ရဲ့ အဝတ်အစားနဲ့ အပြင်အဆင်တွေကို ပြန်လည်ဝတ်ဆင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ OOTD သဘောကျတဲ့ fashionista တွေထဲမှ တစ်ဦးကတော့ သူမရဲ့ IG မှာ Y2K Trend ကို အကောင်းဆုံးပုံဖော်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ trend ကို စိတ်ဝင်စားပြီး ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်အောင် ဘယ်လိုဝတ်ဆင်ရမလဲဆိုတာသိချင်သူတွေအတွက် စုစည်းတင်ပြင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Tank top+ Chunky sneakers + denims (Tank top + chunky sneakers+ နဲ့ ဂျင်း )
Photo credits to @hannayuri_sunshine
2. Cute Clips (ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလစ်တွေ)
3. Knitted top + boots (ဆွယ်တာနဲ့ boots)
4. Oversized coat + sandals (ကုတ်အပွ နဲ့ ဖိနပ်အပါး)
5. Hot yellow top + denims (အဝါရောင်အင်္ကျီ နဲ့ ဂျင်း)
6. Oversized sweater (ဆွယ်တာပွပွ)
7. Pleated skirt (တင်းနစ်စကပ်)
8. Fitted laced dress + pearls (ဇာဂါဝန်ကိုယ်ကျပ် နဲ့ ပုလဲ)
Photo credits to @hannayuri_sunshine Outfit from @mdsmyanmar
PS make sure to check out MDSMYANMAR’s live sale. Details below:
PS MDSMYANMAR ရဲ့ live sale ကို ကြည့်ရှုဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ အသေးစိတ်ကို မှာ ကြည့်ပါ။
Tags 90sfashion, hannayuri, mdsmyanmar, style
Collaboration Fashion Lifestyle
10 DIFFERENT LOOKS WITH ONLY 1 DRESS
No Comments on 10 DIFFERENT LOOKS WITH ONLY 1 DRESS
ဝတ်စုံတစ်စုံ ပုံစံ ၁၀ မျိုး
Created with MDSMYANMAR
Wearing comfy dresses lately while on quarantine? Or just the oversized tee and pajamas? Anyhow, whatever your choice is, we’re sure you have been wearing the same stuff on rotation. So, if you want to refreshalook over and over again without looking boring —aspaghetti dress is perfect! What’s cool about this piece? You can style it in many ways — like what Ashley, a.k.a. Best Dressed shows us in her YouTube video.
ကွာရန်တင်းကာလမှာ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်တဲ့အဝတ်အစားတွေကို ရွေးပြီးဝတ်ဖြစ်လား။ ဒါမှမဟုတ် တီရှပ်အပွကြီးနဲ့ ညအိပ်ဝတ်စုံတွေပဲ ဝတ်ဖြစ်လား။ ဘာပဲဝတ်ဝတ် ဝတ်နေကျအဝတ်တွေကိုပဲ ထပ်ခါတလဲလဲဝတ်ဖြစ်နေမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြီးပဲဝတ်ရလို့ ပျင်းစရာကောင်းတာမျိုးမဖြစ်ဘဲ အမြဲသစ်လွင်နေချင်ရင်တော့ ကြိုးတစ်ချောင်းဝတ်စုံလေးတွေက အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။ ကြိုးတစ်ချောင်းဝတ်စုံလေးတွေက ဘာတွေများကောင်းလို့လဲ? Best Dressed လို့ လူသိများတဲ့ Ashley ရဲ့ YouTube ဗီဒီယိုထဲမှာ သူမ ဝတ်ပြထားသလိုပဲ တစ်ထည်တည်းနဲ့ အများကြီးတွဲဖက်ဝတ်ဆင်လို့ရပါတယ်။
1. The Girly (Pointy-toed flats + jewelry.)
မိန်းကလေးဆန်ဆန် ( ထိပ်ချွန်ဖိနပ်အပါး + ဆွဲကြိုး)
Photo Credits to Ashley’s YouTube Video
2. The Casual (Layerawhite tee + pairawhite sneakers.)
သာမန်ထသွားထလာ ( တီရှပ်အဖြူ + sneaker အဖြူ)
3. The Rich Bitch (Layerapuff sleeve blouse and addahair accessory.)
ကြေးရတက်မိန်းကလေး (လက်အပွအင်္ကျီ နဲ့ ဆံညှပ်လှလှလေးတွေ)
4. Wolf of Wall Street (+ Trousers forasmart casual look )
Wolf of Wall Street စတိုင် ( စမတ်ကျတဲ့အသွင်အပြင်အတွက် ဘောင်းဘီနဲ့တွဲဖက်ဝတ်ဆင်မယ်)
5. As If! (Brown tennis skirt +abrown beret)
အကယ်၍များ (တင်းနစ်စကပ်အညို + ကပ်ဦးထုပ်အညို)
6. Wes chic( Oversized jacket + chunky sandals.)
ဥရောပသူစတိုင် (ဂျက်ကက်အပွ + chunky ဖိနပ်)
7. The Book Worm (Cropped sweater + mini sling bag.)
စာကြမ်းပိုး (ခါးတိုဆွယ်တာ + မီနီစလင်းဘက်)
8. 90’s baby (LayeraLong sleeved top, add Choker & white sneakers.)
၉၀ ခုနှစ်မိန်းမပျို ( လက်ရှည်အင်္ကျီ + Choker + sneaker အဖြူ)
9. 80’s lady(Denim jacket FTW.)
၈၀ ခုနှစ်မိန်းမပျို(အထာကျနေဖို့ Denim ဂျက်ကက်)
10. Instagram Cowboy (Colorful cardigan & bag +boots)
အင်စတာဂရမ်ကောင်းဘွိုင် (အရောင်စုံတဲ့အပေါ်ထပ်အင်္ကျီ နဲ့ အိတ် + boots)
PS If you are looking the perfect and versatile dress we got you! Just scroll down:
PS ပြီးပြည့်စုံမှုရှိပြီး စွယ်စုံဝတ်လို့ရတဲ့ဝတ်စုံကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဘာမှတွေးပူမနေပါနဲ့။ အောက်မှာ ဆက်ကြည့်လိုက်ပါ
MDS Myanmar Josephine Eyelet Dress @59,000 KS
Click link to shop this dress
MDS Myanmar Johan Cami Dress @39,000 KS
MDS Myanmar Jazmi Cami Dress in Floral @ 64,000 KS
MDS Myanmar Migen Contrast Knit Dress @39,000 KS
PS Catch their live sale this Wednesday.
MDS ဒီဇိုင်းသစ်တွေကို❗ 29,000Ks ❗ကနေစပြီး ရောင်းချပေးမယ့် ဒီနေ့ Live Sales မှာ 20,000Ks တန် Gift Voucher နဲ့ 🎁Suprise Gift Box လေးကိုလည်း ချစ်တို့အတွက် ပြင်ဆင်ထားတယ်🥳
“ထိုက်နဲ့ကေ” က အမိုက်စားဒီဇိုင်းလေးတွေကို 💃🏻Styling အမျိုးမျိုးနဲ့ ပြသဖို့ Ready ဖြစ်နေပြီမို့ ချစ်တို့အားလုံးနဲ့ နေ့လည်(2:00) မှာ ဆုံချင်ပါတယ်နော်😘
Tags dress, Fashion, ootdmyanmar, style
5 CLASSIC PRADA BAGS THAT WILL NEVER BE OUT OF STYLE
No Comments on5CLASSIC PRADA BAGS THAT WILL NEVER BE OUT OF STYLE
ဘယ်တော့မှရိုးမသွားမယ့် Prada ရဲ့ Classic အိတ် ၅ မျိုး
Established by brothers Mario and Martino Prada in 1913, the brand first created leather goods like trunks and handbags before achieving huge commercial success with Miuccia Prada’s nylon backpacks in 1979.
What sets Prada apart from other brands are the wearability, functionality, and durability of its bag designs.
Mario နဲ့ Martino Prada ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးက ၁၉၁၃ ခုနှစ်မှာ Prada ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး သားရည်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ လက်ဆွဲသေတ္တာနဲ့ လက်ဆွဲအိတ်တွေကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှာတော့ Miuccia Prada ရဲ့ နိုင်လွန်ကျောပိုးအိတ်က ဈေးကွက်ထဲမှာ အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမား ရရှိခဲ့ပါတယ်။
Prada ရဲ့ အိတ်ဒီဇိုင်းတွေက သုံးပျော်တယ်၊ ဖက်ရှင်ကျပြီး အကြမ်းခံတဲ့အတွက် အခြားတံဆိပ်တွေထက်ထူးခြားနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
If you want to invest in your own Prada piece, here are classic designs—both old and new—that you can never go wrong with:
Prada အိတ်တစ်လုံးဝယ်ယူဖို့ စိတ်ကူးနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဇိုင်းအဟောင်းနဲ့အသစ်တွေထဲက ဘယ်တော့မှရိုးမသွားတဲ့ classic ဒီဇိုင်းအချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Medium Saffiano Leather Galleria Bag, $2690, PRADA, prada.com
2. RE-EDITION NYLON MINI BAG
Re-Edition 2000 Nylon Mini Bag, $775, PRADA, prada.com
3. NYLON TOTE BAG
Nylon Tote Bag, $1290, PRADA, prada.com
4. DIAGRAMME BAG
Medium Leather Diagramme Bag, $2450, PRADA, prada.com
5. MONOCHROME SAFFIANO LEATHER BAG
Small Saffiano Leather Prada Monochrome Bag, $2200, PRADA, prada.com
Tags Fashion, ootdmyanmar, prada, style
7 FASHION ITEMS YOU NEED TO COP: NAY CHI OO’S STYLE
No Comments on7FASHION ITEMS YOU NEED TO COP: NAY CHI OO’S STYLE
နေခြည်ဦးရဲ့ style ကနေ ရရှိနိုင်မယ့် Fashion Items ၇ မျိုး
This Burmese celebrity keeps her million followers engaged with her diverse aesthetic. She can be girly, traditional, and streetwear chic.
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆယ်လီတစ်ဦးဖြစ်သူ နေခြည်ဦး က တော့ သူမရဲ့ များပြားလှတဲ့ follower တွေကို မတူညီတဲ့ ဖက်ရှင်တွေ အလှအပရေးရာတွေနဲ့ အကောင်းဆုံး ဆွဲဆောင်ထားနိုင်သူပါ။
မိန်းကလေးဆန်တဲ့ ပုံစံ၊ မြန်မာဆန်ဆန် နဲ့ စတိုင်ကျတဲ့ streetwear တွေကိုလည်း လိုက်ဖက်စွာ ဝတ်ဆင်တတ်ပါသေးတယ်။
Now, let us decode her signature style to see on how she manages to keep her aesthetic consistent and inspiring even during this quarantine moment.
Quarantine ကာလမှာတောင် အများနဲ့မတူတဲ့စတိုင်တွေနဲ့ inspire ဖြစ်စေတဲ့ ဖက်ရှင်တွေကို ဘယ်လိုထူးခြားစွာ ဝတ်ဆင်လေ့ရှိလဲဆိုတာကိုသိရဖို့ သူမရဲ့ ထင်ရှားတဲ့စတိုင်အချို့ကို ရှာဖွေစူးစမ်းကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
1 SPECS FOR THE NERDY GIRL (ရိုးရိုးအေးအေး မိန်းကလေးအသွင်အပြင်အတွက် မျက်မှန်လေး‌တွေ)
Photo Credits @naychioo_official
2 GOLD JEWELLREY FOR THE EXPENSIVE VIBE (ဈေးကြီးတဲ့ အသွင်အပြင်ကို ရရှိစေဖို့ ရွှေရောင်လက်ဝတ်လက်စားတွေ)
3 CLASSIC EARRINGS (ရိုးရှင်းပြီး ခန့်ညားတဲ့နားကပ်တွေ)
4 SUNNIES (နေကာမျက်မှန်တွေ)
5 TEES (တီရှပ်တွေ)
6 ANYTHING WHITE (အဖြူရောင်အဝတ်အစား၊အသုံးအဆောင်တွေ)
7 A BEAUTIFUL SMILE (လှပတဲ့အပြုံး)
Tags Fashion, naychioo, ootdmyanmar, style
Join 112,103 other followers
© 2021	OOTDMYANMAR